သင်၏စီးပွားရေးသည်ဤအဓိကသော့ချက် ၄ ချက်ကိုသတိပြုမိပါသလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 24, 2007 စနေနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2007 Douglas Karr
သိပ်မကြာသေးခင်ကမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒေသခံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူ၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်းအခွင့်အလမ်းအပေါ်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ကူးစက်တတ်သည်။ သူ၏ကုမ္ပဏီအမှတ်အသားပြုနေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။
ဒါဟာခက်ခဲတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းပါ။ ဘတ်ဂျက်များသည်တင်းကျပ်စွာရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်ကိုကျော်လွှား။ မရနိုင်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသည့်အခါ၎င်းသည်အဓိကမဟာဗျူဟာ ၄ ခုသို့ကျဆင်းသွားသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
သင်၏စီးပွားရေးပေါ် မူတည်၍ ဤမဟာဗျူဟာများနှင့်ဆက်စပ်သောမက်ထရစ်များသည်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်သောမက်ထရစ်ရှိသင့်သည်။ သင်တိုင်းတာလို့မရတဲ့အရာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူး
စိတ်ကျေနပ်မှုသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်နှစ်ကြိမ်မှတ်ပုံတင်သောအရာဖြစ်သည်။ မကျေနပ်သောဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှထွက်ခွာသွားပြီးသောအခါ“ whew” ကိုကြားသိခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မကြာခဏလျစ်လျူရှုထားတာကသူတို့မကျေနပ်မှုကိုအခြားလူတစ်ဒါဇင်တစ်ဝက်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်…သင်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရုံသာမကနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းလည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ မကျေနပ်သောကြောင့်ထွက်ခွာသွားသောဖောက်သည်များ (နှင့် ၀ န်ထမ်းများ) သည်အခြားသူများအားပြောပြသည်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်!
သူတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသောကုမ္ပဏီကနားမထောင်သောကြောင့်သူတို့သိပြီးသားအခြားသူများကိုပြောပြသွားမည်။ နှုတ်ဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်လုံလောက်သောပြောဆိုမှုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်စီးပွားရေးနှင့်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ကဲ့သို့ကိရိယာများသည်မကျေနပ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
သင်၏ဖောက်သည်များ၏အပူချိန်ကိုသင်စစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့သည်ကျေနပ်မှုရှိသည် (သေချာသည်ထက်) ရိုးရှင်းတဲ့အီးမေးလ်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ စစ်တမ်းစသည်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုတိုင်ကြားရန်အခွင့်အရေးမရှိပါကသူတို့သည်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုတိုင်တန်းမည်ဖြစ်သည်။
Retention သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူသူများအားသိမ်းထားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
၀ ဘ်ဆုိုဒ်တစ်ခုအတွက် retention သည်ပြန်လည်ရောက်ရှိသောထူးခြားသည့် visitors ည့်သည်စုစုပေါင်း၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ သတင်းစာတစ်ခုအနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုသည်မှာစာရင်းသွင်းခြင်းသက်တမ်းတိုးသည့်အိမ်ထောင်စုများ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် retention သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အကြာတွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုထပ်မံ ၀ ယ်ယူသော ၀ ယ်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူသူအသစ်သို့မဟုတ်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်ဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်မဟာဗျူဟာဆိုသည်။ ကြော်ငြာခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်နှုတ်နှုတ်ခြင်းသည်သင်အားဆွဲဆောင်ခြင်း၊
မမေ့ပါနှင့်။ ဖောက်သည်အသစ်များကိုရယူခြင်းသည်ရှိပြီးသားများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ ကျန်သူအားအစားထိုးမည့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသာပြန်တန်းတူမှတတ်၏။ ဖောက်သည်အသစ်ရရှိရန်မည်မျှကုန်ကျသည်ကိုသင်သိပါသလား။
အမြတ်အစွန်းသည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးပြီးလျှင်ငွေမည်မျှကျန်သည်ကိုသေချာသည်။ သင်အမြတ်အစွန်းမရရှိလျှင်၊ အမြတ်အစွန်းသည်အမြတ်အချိုးသည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုလူအများစုကဤအရာကိုအလွန်နီးကပ်စွာအာရုံစိုက်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအမှားတစ်ခုအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ Wal-mart သည်အမြတ်အစွန်းအလွန်နည်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းအမြတ်အများဆုံးကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မေလ 24, 2007 မှာ 9: 08 pm တွင်
အံ့ post ဖွယ်ရာပို့စ်တစ်ခု! အထူးသဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုချစ်၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ 25, 2007 မှာ 2: 05 pm တွင်
လမ်းပေါ်ရှိဆိုင်ခန်း၊ စတိုးဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အမှန်တကယ်ခွဲခြားထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာမျှော်လင့်ချက်တွေတောင်မပြည့်မီဘူး၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂရုစိုက်သောမည်သည့်ကုမ္ပဏီကိုမဆိုအမြဲတမ်းသတိပေးသင့်သည်။
မေလ 25, 2007 မှာ 5: 12 pm တွင်
ဂရိတ်ပို့စ်ကိုအရသာရှိအောင်သိမ်းရန်ကြိုးစားနေသည်။ သို့သော်မှတ်သားထားပါလိမ့်မည်။ !! အလွန်ကြီးစွာသောလေ့လာရေး!
မေလ 28, 2007 မှာ 11: 44 AM
ဟားဟား! ငါဒီ post ရဲ့အဆုံးမှာအစိုးရကိုးကားကြိုက်တယ်! ဒါအရမ်းမှန်ပါတယ် မည်သည့်ပါတီကပြသနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ လူများသည်ကွန်ဂရက်ကိုမကျေနပ်ကြပါ၊ သမ္မတနှင့်မကျေနပ်ပါ။ များစွာသောသူတို့သည်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်ခရိုင်အစိုးရများနှင့်ပင်မကျေနပ်ကြပါ။
တဖန်သင်တို့အဘယ်အရာကိုသိ ??? အစိုးရသည်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး စီ၏သက်တမ်း ၆ လခန့်သာပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။